privacy - သင့် YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်မာလ်တီမီဒီယာစီမံကိန်းများကိုအခမဲ့ဂီတနှင့်မီဒီယာ downloads,
PetrPikora.com je လိုလားသူvašinejvyššíbezpečnostzabezpečentechnologií HSTS (HTTP ကိုတင်းကျပ်ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး) ဆာဗာ။ သည် HTTP တင်းကျပ်ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး (HSTSတစ်ဦးzjednodušuje ochranu proti únosuspojení (tzv útoky) je v informatice bezpečnostní mechanismus, kterýchránísíťovou komunikaci mezi webovýmprohlížečemတစ်webovým serverem předအဆင့်နှိမ့်။ cookie ကိုပြန်ပေးဆွဲ) ။ prohlížeči komunikaci pouze pomocíšifrovaného HTTPS ကိုpřipojeníတစ်vyloučil Tim přenos dat nezabezpečenýmသည် HTTP protokolem v vynutil Mechanismus umožňuje, aby webový server ကို။ HSTS ကို RFC 6797 definuje ။ HSTS aktivuje Webový server ကိုpomocíသည် HTTP hlavičky တင်းကျပ်သော-ပို့ဆောင်ရေး-လုံခြုံရေး, která svou hodnotou definuje časovýúsek, po kterýmůžeprohlížečpřistupovat serveru výhradnězabezpečeně k ။ HSTS pomáháchránitwebové aplikace proti některýmpasivním (odposlechy) တစ်ဦးaktivnímsíťovýmútokům။ Díky HSTS mechanismu Ma útočník, kterývyužívá Man-in-the-Middle útok, velmi sníženoušanci, Ze odchytínějakéžádosti Ci požadavkyodeslané mezi uživatelemတစ် webovou aplikací။ Staráme se ဏvašibezpečnost!
Uživatelé se mohou po přečtení ကြော်ငြာနှင့် Google အကြောင်းအရာကွန်ယက်များအတွက်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ z používánísouborů cookie ကို DART ယူမှုကိုဖျက်.
သငျသညျလိုလျှင်အချိန်မရွေး Google က Inc မှမှ cookie ကိုဖိုင်တွေငြင်းဆန် v Obsahové Siti, Google prostřednictvím DoubleClick cookies တွေကိုငြင်းပယ်.
Doporučenýစာသားကို: ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: https://petrpikora.com ။
Doporučenýစာသားကို: ဧည့်သည်ကဤ website ကိုမှမှက်ချက်ပေးရန်အတွက်တဲ့အခါမှာ, ဒေတာကိုစပမ် detect လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်ထားတဲ့ browser ကို defining နောက်ထပ်ဧည့်သည်ရဲ့ IP လိပ်စာနှင့် User-agent string ကို, မှတ်ချက်ပေးရန်ပြပုံစံစုဆောင်းနေကြသည်။
Doporučenýစာသားကို: သင်ဤ website ကိုမှပုံရိပ်များများကိုအပ်လုဒ်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ embedded တည်နေရာသတင်းအချက်အလက် (EXIF ဂျီပီအက်စ်) နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအပ်လုတ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုမှဧည့်သည်များ site ပေါ်တွင်ပုံ၏တည်နေရာပေါ်မဆိုဒေတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Doporučenýစာသားကို: ကျွန်ုပ်တို့၏ site သင်တစ်ဦးမှတ်ချက် add လျှင်, သင် cookies များကိုများတွင်အမည်များ, အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသိုလှောင် enable နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အသစ်တခုမှတ်ချက် post သောအခါအသင်တို့၏သက်သာတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားဤနည်းအားဖြင့်, ထို့နောက်သင်တို့သည်ဤဒေတာဖြည့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား cookies များကိုတစ်နှစ်တစ်ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်။
Doporučenýစာသားကို: ဒီ site ပေါ်တွင် entries (ဥပမာ embedded အကြောင်းအရာဆံ့စေခြင်းငှါ, ဗီဒီယိုက, Images ကို, ဆောင်းပါးများ, etc) ။ အဆိုပါဧည့်သည်အခြား site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်ကဲ့သို့သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေ embedded အကြောင်းအရာတူလမ်းအတွက်ပြုမူ။
Doporučenýစာသားကို: သင်တစ်ဦးမှတ်ချက် add လြှငျ, မှတ်ချက်နှင့် metadata အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းထားသည်။ အဆိုပါဒေတာကိုအစားဖြည့်ညှင်းတန်းစီကိုင်ထား၏, အလိုအလျှောက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်များ၏ခွင့်ပြုချက်အဘို့အသိမ်းဆည်းထားသည်။
Doporučenýစာသားကို: သင်ဤ site ပေါ်တွင် account တစ်ခုရှိသည်သို့မဟုတ်သင်မှတ်ချက်များဖြည့်စွက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးသမျှသောသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ကိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များများတင်ပို့ဖိုင်ကိုရယူဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင်သည်လည်းငါတို့သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ကိုင်ရာကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဒီ option ကကျွန်တော်, အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မပါဝင်ပါဘူး။
Doporučenýစာသားကို: ဧည့်သည်မှတ်ချက်များကိုပြည်ပမှာတည်ရှိစေခြင်းငှါအရာ automated spam များကိုထောက်လှမ်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
→အသုံးပြုသူများပြီးနောက် URL မှာကို Google ကြော်ငြာနဲ့ content ကွန်ယက်ကို privacy ကိုမူဝါဒကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် DART cookie ကိုများအသုံးပြုခြင်းထဲကရွေးချယ်နိုင်ပါစေ - http://www.google.com/privacy_ads.html
အဲဒီကြော်ငြာမိတ်ဖက်၏တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ရဲ့ site ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီရှိပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦး updated နှင့်ဆိုက်ဘာသယံဇာတဤနေရာတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်: သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒများ.
သငျသညျသူတို့အလေ့အကျင့်များအပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အချို့သောအလေ့အကျင့်များထွက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းညွှန်ကြားချက်အဘို့ဤအ Third-party ကြော်ငြာဆာဗာ၏သက်ဆိုင်ရာ privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ www.PetrPikora.com ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒလျှောက်ထားဘူး, ငါတို့သည်မိုးခေါင်သို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာများကို web site များ၏လှုပ်ရှားမှုများမထိန်းချုပ်နိုင်။ သငျသညျအဆိုပြုသီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒများနှင့်ကဒီမှာသူတို့ရဲ့လင့်ခ်တစ်ခုဘက်စုံစာရင်းကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ: သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ Links များ.
သငျသညျ cookies တွေကို disable ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်သည်မေလတစ်ဦးချင်းသင့် browser ရွေးချယ်စရာမှတဆင့်ဒါလုပ်ပါ။ တိကျတဲ့ကို web browser များနှင့်အတူ cookie ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို browser များ '' သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ကွတ်ကီးဘာတွေလဲ?
ဤ extension ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာသို့မဟုတ်ခွဲဝေမှု data တွေကိုသိုလှောင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ privacy ကိုမူဝါဒပါဝင်သည်ချင်နိုင်ပါစေအဘယျသို့အပါအဝင်, ဒီအလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
user data ကိုကိုင်တွယ်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်, YouTube ကိုအောက်မှာ၏ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြေငြာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
user data ကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, Vimeo မှာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီဖတ်ရှုပါ https://vimeo.com/privacy.
user data ကိုကိုင်တွယ်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် https://developers.google.com/fonts/faq နဲ့ Google ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒမှာ https://www.google.com/policies/privacy/.